अपर तामाकोशी आईपीओमा आवेदन दिने सोमबार अन्तिम दिन ! - Everest Dainik - News from Nepal
अपर तामाकोशी आईपीओमा आवेदन दिने सोमबार अन्तिम दिन !
कात्तिक १५ देखि सर्वसाधारणका लागि विक्रीमा आएको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने सोमवार अन्तिम दिन रहेको छ ।
कम्पनीले छिटोमा कात्तिक १९ र ढिलोमा मङ्सिर १४ गतेसम्म विक्री खुला गर्ने सूचना जारी गरे पनि छिटो अवधिमै मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले विक्री बन्द हुन लागेको हो । विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले सोमवार ११ बजेसम्म २ लाख ५६ हजार आवेदकबाट रू. ४ अर्ब ८० करोड बराबरको आईपीओ खरीदका लागि आवेदन परेको छ । यस आधारमा तोकेभन्दा ३ गुणा बढी आवेदन अहिलेसम्म परिसकेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि रू. १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता साधारण शेयर जारी गरेको हो । यस आईपीओमा न्यूनतम ५० र अधिकतम १ हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सर्वसाधारणलाई बिहीवारदेखि आईपीओ जारी गरेको यस कम्पनीले बुधवार आयोजना प्रभावित स्थानियलाई कुल १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता शेयर बाँडफाँट गरेको छ ।
यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहित नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोष संस्थापक शेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको निर्माणाधिन ४ सय ५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना तामाकोशी नदीमा अवस्थित छ । आर्थिकअभियानबाट
ट्याग्स: upper tamakoshi hydropower